Home Wararka Gudaha Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay dabkii ka kacay Suuqa Banaadir
Madaxweynaha Jamhruuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa oo ka hadlay dabkii xalay ka kacay Suuqa Banaadir ayaa xanuunka la qeyb sadayganacsatada Soomaaliyeed ee hantidoodii ku gubatay dabkaas.
” Waxa aan xannuunka iyo dhibka la Wadaagayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee hantidoodii ku gubatay dabkii xalay ka kacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho kuna fiday goobaha ganacsi ee u dhow ayuu yiri” Madaxweynaha.
Sidoo kale wuxuu sheegay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in Musiibada dabku ay ka mid taha6 Arrimaha uga baahan maareynta, isla markaana xilligeeda iyo xalkeeda ay gaari doonaan.
Khasaaro hantiyadeed oo aad u farabadan ayaa ka dhashay dabkii ka kacay Suuqa kuyaalla Banaadir, waxaana horay uga hadlay Ra’iisul Wasaare Rooble, Guddoomiyaha Golaha Shacabka & Siyaasiyiinta Mucaaradka.
Previous articleSoomaaliya iyo Hey’adda IMF oo gaaray heshiis cusub kadib wadahadalkii ay la yeesheen Madaxweynaha cusub Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Next articleDEG-DEG:-Siyaasiga Cabdulaahi Sheekh Xasan ayuu Dhawac Culus Kasoo Gaaray qarax Lagula eegtay Degmada Wadajir
Man United Oo Ka Jawaabtay Xiisaha Chelsea Ee Cristiano Ronaldo